Dowlada Kenya oo Baaritaano Adag ka wada xadka ay la leedahay gobolada Somalia – SBC
Dowlada Kenya oo Baaritaano Adag ka wada xadka ay la leedahay gobolada Somalia
Ciidamada Dowlada Kenya ee Jooga xadka kala qeybiya Somalia iyo Kenya gaar ahaan deegaanka Dhoobley iyo Libooya ayaa bilaabay baaritaano xoogan oo ay kula dhaqaaqayaan gaadiidka halkaasi isaga goosha.
Ciidamada Dowlada Kenya ayaa maanta la arki karay iyagoo isku fidiyay qeybaha kala duwan ee xadka labada dal islamarkaana baaritaano aad u waaweyn ka wada halkaasi iyagoona baaraya gaadiidka u baxa xeryaha Qaxootiga Ifo, Xagar, Dhadhaab iyo goobo kale .
Qaar ka mid ah dadka dega xadka labada dal waa Kenya iyo Somaaliyee ayaa SBC International la hadlay iyagoona sheegay in baaritaanadan ay yihiin kuwo aad u waaweyn ciidamada Dowlada Kenyana yihiin kuwo ka tiro badan intii horay halkaasi u joogay.
Waxay sidoo kale dadka deegaanku intaasi ku dareen in baaritaanadan ay u maleynayaan in ay yimaadeen ka dib markii la shaaciyay in la dilay Hogaamiyihii Ururka Alqaacida Usama Bin Ladin .
Horay ayay saraakiil ka tirsan Kenya sheegeen in ay dhici karto weeraro kaga yimaada dhanka xarakada Alshabaab dalka Kenya kuwaas oo xiriir la yeelan kara carada ka dhalatay dilkii Hogaamiyaha shabakada Alqaacida, taasna waa mida ka dambeysa baaritaanadan culus ee ay ciidamada Kenya halkaasi ka wadaan.
Sikastaba xaalku ha ahaadee ma jiraan ilaa iyo iminka cid ay ciidamada Kenya ku qabteen sida la ogyahay baaritaanadaas waxaasi macquul ah in ay jiraan dad lagu tuhmay oo ay ciidamada qabteen sida ay xuseen dadka deegaanada ka agdhow halka ay baaritaanada ka socdaan.
C.qani Maxamed Cali